नेकपा पार्टी एउटै, लेबी फरक !::Hamrodamak.com
नेकपा पार्टी एउटै, लेबी फरक !
संघीय संसद्मा फरक–फरक लहरमा बस्ने सांसद एकीकरणयता मिसिएर बस्छन् ।
काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको पाँच महिना भइसक्यो । संघीय संसद्मा फरक–फरक लहरमा बस्ने सांसद एकीकरणयता मिसिएर बस्छन् ।
तर, उनीहरूले पार्टीलाई बुझाउने लेबी भने फरक–फरक छ। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार तत्कालीन एमालेतर्फकाले प्रतिसांसद मासिक १३ हजार र तत्कालीन माओवादी केन्द्रतर्फकाले १२ हजार तिर्ने गरेका छन्।
पार्टीलाई तिर्नुपर्ने लेबी कटाएर मात्रै सचिवालयले सांसदको तलब बैंकमा पठाउने गरेको छ । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले लेखेका छन्।
प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा गरी एमालेतर्फका १ सय ४८ र माओवादीका ६५ सांसद छन् । ती दुवै मिल्दा नेकपाका २ सय १३ सांसद भइसके । संसदीय दल एउटै, सचेतक र प्रमुख सचेतक पनि एउटै । दुई दलबीच जेठ ३ मा एकीकरण भएको थियो । निर्वाचन आयोगले समेत एकीकृत दल ‘नेकपा’ लाई मान्यता दिइसकेको छ।
जेठ १६ मा बसेको संसदीय दलको बैठकले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतक तोकेको छ । एकीकरणअघि एमालेको प्रमुख सचेतकमा खगराज अधिकारी र सचेतकमा शान्ता चौधरी थिए । त्यस्तै माओवादीको प्रमुख सचेतकमा देव गुरुङ थिए । संसदीय दलको नेतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार नेकपाले एमालेतर्फबाट मासिक करिब १९ लाख र माओवादीतर्फबाट करिब ७ लाख ८० हजार पाउने गरेको छ । ‘हामी पार्टी एउटै भए पनि लेबी फरक छ,’ एमालेतर्फका एक सांसदले भने, ‘पार्टी एकीकरण भएको यतिका दिन हुँदा पनि लेबी किन समान नबनाइएको हो ? नेताहरूलाई बारम्बार भन्दा पनि चासो दिइएको छैन।’
पार्टीमा समान हैसियत भएपछि लेबीमा विभेद गर्न नहुने सांसदको भनाइ छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लेबी समान बनाउने प्रयास भइरहेको बताए । ‘पार्टी एकीकरण त भयो, लेबी समान बनाउन सकिएको छैन । यसका लागि वर्क आउट भइरहेको छ । पार्टीले गम्भीर रूपमा लिएको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सदस्यसँग समेत लेबी लिनुपर्ने भएकाले यस विषयमा छलफल भइरहेको नेम्वाङले बताए ।